SOMALITALK - SSUP
Warsaxaafadeed uu soo saaray Xisbiga SSUP, Mowqifka siyaasadeed ee ku wajahan Siyaasadda Guud ee Soomaaliya.
Gudoomiyaha Xisbiga SSUP Yaasiin Maaxi Macalin
Waxaa sharaf ii ah Anigoo ku hadlaaya magaca Guddiga Fulinta, Golaha dhexe, iyo Dhamman Xubnaha Xisbiga SSUP, in aan halkaan idiinkugu soo gudbiyo marka hore salaan diiran,marka xigtana anigoo ka faa`idaysanaaya fursadaan, aan halkaan ugu tabiyo dhamman Shacabka Somaaliyeed ee waddaniga ah meel kastoo ay jogaanba, saqiir iyo kabiirba, Hambalyada Sannadka Cusub ee 2005.
Waxaa Xisbiga SSUP sharaf u ah in uu halkan marka hore u mahad celiyo,kadibna u tabiyo Hambalyada Sannadka Cusub dhamman Ururrada Caalamiga ah, iyo kuwa heer goboleed iyo Dowladaha daneeya arrimaha Somaaliya iyo Soomaalida, kaalinka wax ku oolka ah ay ka ciyaareen welina mashquul ku yihiin sare u hinjinta iyo dib u soo celinta Karaamada Shacabka Somaaliyeed.
Waxaa kaloo lama illaban ah, kaalinka ay ka ciyareen, welina mashquul ku yihiin, Hay’adaha Samafalka iyo gargaarka Caalamiga iyo howl wadeenadooda, sida binu aadminimada ku dheehan ay ula soo taagan yihiin had iyo jeer badbaadinta, nafaqeynta, daryeelka iyo daaweynta Shacabka Soomaaliyeed, iyagoo marar badan ku muteysta: afduub, dil ,dhac iyo arrimo kaloo aan ku fiicnayn damiirka aadanaha.
Xisbiga SSUP, wuxuu u rajeynayaa shacabka Soomaaliyeed, Sannad nabadeed, Sannad cadaaladeed, Sannadka ay ku rumowdo, isla markaana dhaqangasho himilada la so noqoshada Qarannimada Somaaliyeed, taasi uu Xisbigu mab’daiiyan aaminsanyahay in ayan ku imaan karin midnimada shacabka Soomaaliyeed la’aantiisa.
Midnimadaasi, marka ay xaqiiqowdo, ayaa hubaal ah in Shacabka Somaaliyeed uu awoodo in uu iska qaado heeryada dul saran, una la soo noqdo karaamadiisa, isla markaana uu jiiro caqabadaha, iyo qodxaha ku hor daadsan waddada horusocdkiisa, isagoo isku kalsoon, kuna kalsoon dalkiisa, Ummadiisa maskax iyo maalba, meel kastoo ay ka jogaan dunida.
Haddii aan dib u eegno dhinaca dhacdooyinka sannadka 2004, waxaan dhammanteen goob jog u ahayn gunaanadka shirka labada sannadood ka socday dalka Keenya, shirkaasi oo marka hore lagu heshiiyay laguna saxiixay Oktoobar 2003 sannadka markuu ahaa xabbad joojin, tasoo anay jirin cid iska xilsaartay dhaqangelinteeda iyo ilaalinteeda oo illa dhowaan ay si isdba jog ah dagaaladu ugu socdeen gobollo badan oo ayaan daran Somaali badanna ay ku nafwaysay. Waxaana goob joog la iskuna afgartay dadaal fara badan ka dib, Xeer Federaali ah oo ku meel gaar ah, laguna xulay Barlamaan KMG oo ka kooban 275 Xubnood, kaasi oo isaguna doortay, Guddomiyaha Barlamaanka iyo ku xigeenaddiisa, waxaan kaloo goob joog u ahayn sida uu Baarlamaanka u doortay Madaxweynaha KMG.
Waxaan kaloo aragnay sida Dowladda an dhismaheedu dhammeystirnayn ay qaaylo dhaan Caalamka ula tagtay ayadoo weydiisanaysa Ciidammo ka dhiga Hubka Shacabkeeda iyo natiijooyinka wajiyada badan oo ay kala kulantay.
Waxaa xusid mudan, sida uu Madaxweynaha DF KMG ah uu u soo xulay, kuna magacaabay Raisal Wasaaraha DF KMG, kasoo isaguna, kaddib dhafar badan, wadahal dheer, iyo gor gortan aan sal la gaaro lahayn, uu ku soo doortay, kuna magacaabay xubnaha Dowladiisa.
Waxaaynu marag ka ahayn sida uu Barlamaanka ugala noqday kalsoonida Dowladdi la dhisay, isagoo ku eedeyay Dowladda in ay ku xadgudubtay dhowr qodobbo oo ka mid ah Axdiga Federaalka ah ku meel gaarka ah.
Kama aynaan daalin daawashada dhacdooyinkaasi, meel waliba aanu ka joognay dinida dusheeda, ee waxaan kaloo aragnay sida qaar ka mid ah Dowladaha Deriska iyo kuwa Deeqda bixiya ay isku xilqaameen kuna mashquul noqdeen u caqli celinta, kala maslaxidda, iyo isu soo dhoweynta labo ka mid ah garabyada awooda Dowliga ee Somaaliya kuwasoo kala ah :
(1) Garabka Sharci dejinta iyo Ansixinta (Barlamaanka), iyo
(2) Garabka Fulinta oo ah Dowladda oo ka kooban (Madaxweynaha, Golaha Wasiiradda iyo Ku Wasiir ku Xigeennada)
Waxaan kaloo aragnay, maragana ka nahay, iyadoo taasi nasiib darro weyn inoo tahay dhammanba in aan qofna ku mashquulsanayn, ayan dareensanayn amaba garan in weli halkaasi ka maqan yahay garab kale oo muhiim ah oo ka mid ah dhismaha Dowladeed , kasoo ah:
(3) Garabka Sharciga.
(Guuddi Sare ee heer Qarameed oo ka kooban Sharciyaqaano, oo xilkoodu noqonaayo tafsiir ka bixinta qodobbada sharciga ee la isku qabsado)
Waxaanu marag ka ahayn ficilkii foolxumada lahaa ee ka dhacay Barlamaanka KMG gudihiisa, iyo natiijada xubnaha qaarkood ee baarlamaanka ka dhaxlayn, kaddib marka koox waliba oo iyaga ka mid ah sharciga u fasiratay sida danteedu ku jirto.
Haddaba aan dib u jaleecno oo aan daraasad ku sameyno dhacdooyinkaasi, innagoo isla mar ahaantaasina halkan ku caddeynayna mowqifka siyaasadeed ee Xisbiga SSUP ee ku wajahan, Siyaasadda Guud ee Soomaaliya,waqtiga xaadirka ah Dowladda KMG Federaaliga ah ee Somaaliya, iyo BAAQ uu Xisbiga SSUP u gudbinaayo Hayadaha Caalamiga,Ururrada heer Goboleed, kuna wajahan arrimaha Soomaaliya.
Marka hore waxaan rabaa in aan halkan ku caddeyo qoddobo muhiim ah oo hordhac ah Kasoo ah:
Xisbiga SSUP in uu yahay Xisbi Somaaliyeed oo isu sara is taagay difaaca, daryeelka iyo sare u qaadida Sharafka iyo karaamada Shacabka Somaaliyeed.
Soo celinta amniga iyo kala danbaynta Kana qayb qaadanaayo dib u dhiska hay’adaha u adeega danaha shacbka, soo noolaynta ilaha dhaqaalaha iyo ururinta hubka ku jira gacanta dadwaynaha .
Marka aan sidaasi leeyahay waxaan ula jeeda in Xisbigu ahmiyadiisu kowaad tahay qadiiyadda Qaranka iyo Shacabka Soomaaliyeed.
Arrinkaasi oo ina siinaya geesinimo in aan u qeexno xaaladda Waddankeena sida ay tahay.
Taarikhdii sharafka lahayd ee Waddankeenu iyo Shacabkeenu ku dhisnayd :Midnimo, wadajir iyo isu hiilin tasoo u suurta gelisay shacabka Soomaaliyeed in ay ku hantaan : Xornimadooda,iyo wadajirkoodu manta Shacabkeena waa ka qaawanyahay .
Haddii aan dib ugu noqonno tariikhda kaddib marka dalka nidaamka Dowliga burburay, waxaynu ognahay in Waddankeenu yahay waddanka qura ee dunida Taarikhda casriga ah kaga xusan : Waddan aan Dowlad, sharci iyo nidaam midna lahayn illa maalinka manta ah.
Sababaha dhaliyay Burburka wadajirki qarameed, iyo kala furfurka bulshada Somaaliyeed waxay leeyihiin asbaabo tariikhi ah oo Dowladihii hore, Xukuumadda Kacaankuba iyo Dowlado ajnabi ah qarkood dowr weyn oo aan la inkiri karin ka ciyareen, iyagoo adeegsanaaya hubka qura ee awood u leh in uu kala dilo, kal firdhiyo, kala geeyo Shacabka Somaaliyeed , kasoo ah :QABIILKA
Hubkaasi dilaaga ah oo loo adeegsaday siyaabo fara badan oo kala geddisan, marxaladaha kala duwan ee Taariikhda Soomaaliyeed, haddii aanu dhowr ka magacaabno ay kala yihiin: Awood bursi,Caburin, ku dagaal gelin,isku xureyn,aargoosi, xalalaysi qadiiyad,eedeyn, la noqosho midnimmada, iwm.
Taasi oo iyana markeeda ina dhaxalsiisay, in tiro aan xisaab lahayn ee dadkeenu ku dhinto sabab la’aan, marxallado kala duwan, qaar badan oo Ummadeenu ka mid ah kaga haajireen dalkooda hooyo, maantana magan ku yihiin dacallada dunida, inta qaar kale oo aan xisaab lahayn ku dhinteen badaha iyo lama degaanada qaarkood, qaarna xabsi ku muteystay inta ay hijrada ku jireen.
Muqaalka dunida laga haysto dalkeena ay tahay: “Halaag iyo baa’ba, oo Ummadiisu ugu sabab tahay”.
madaama ayan Caalamku uusan ka dhex arkin Soomaaliya dano Siyaasadeed iyo Dhaqaale, wuxuu door biday in uu wejigu ka dadbado, oo uu ku ekaado in Hay’adaha ka howlgala Gargaarka ay gacan siyaan si ay nafta ku celiyaan oo boogahana ka dhayaan inta aan weli xabbada, gaajada iyo cudurka dilin .
Labada sannadood ee ugu dambeeyay ayaa Caalamka oo ay hor kacayso Itixaadka Yurub (European Community) gacan ka geysatay nabadda iyo heshisiinta Ummada Soomaaliyeed.
Waxaa arrinkaasi ka horreyay isku day wadahallo nabadeed oo sare u dhaafay dersin oo dhowr sifood ku fashilmay in xal lagu gaaro arrinka Waddankeena.
Urur Gobleedka IGAD ee Bariga Afrika ayaa gogosha u fidiyay shirkaasi waddanka Keenya.
Nasiib darro qilafaadyo daneed ee Strateji ah, oo kala geddisan iskana horimaanayay oo ay wateen waddama deriska la ah Dalkeena,iyo arrimo kale oo dhowr ah oo anan halkan ku soo koobi karin, ayaa saameyn weyn ku yeeshay natiijada wadahalka nabadeed iyo ayatiinka Dalkeena Hooyo.
Waxaynu aragnay in dadka sida joogtada ah dembiga uga galay Dalkeena in loo xaqiijiyo, loo hiiliyo, loo xalaaleeyo in ay wax ka qadiriyaan aayaha Ummadeena, laguna abaalmariyo Xilka Dowladdnimada.
Waxaa si aan xishood lahayn albaabaka looga saaray,mutacalliminta ,
Aqoonyahannada iyo farsamoyaqaanada kala duwanaa, ee wadaniga ah oo aan dembi ka galin dalka,iyo dadka, had iyo jeerna heegan u ahaa difaaca iyo dhaqangelinta nabadda, waxaa kaloo iyadana wehliyay Ururrada Madaniga ah ee Soomaaliyeed.
Intaasi kuma koobna, arrinku waxaa la xalalayay oo sharci laga digay “Sunti Qabiilka” oo la yiri wax ku qeeybsada. Si loo helo “Xal Siyaasadeed” oo waanu aragnay iyadana wixii ka dhacay, iyo natiijada aay dhashay.
Sidaa aawadeed wuxuu mab`da ahaan Xisbiga SSUP ka soo horjedaa Qabiilka, iyo wax kasta oo kala dilaaya, kalana qeybinaaya Shacabka Soomaaliyeed.
Xisbiga SSUP maaha “Xal diid macangag ah”, oo “Seef la bood ah” marka aan sidaasi leenahayna maaha in aanu saamexeyno waxa haddeer ina hor yaal una sacaba tumayno dhismaha Dowladda iyo Barlamaanka Federaaliga ee KMG ah.
Xisbiga SSUP wuxuu soo dhoweynaayaa strateeji ahaan xal kasta ee u suurta gelineeysa waqtiga xaadirka soo celinta nidaamka iyo kala dambeynta, kuwasoo iyaguna markooda suurta gelinaya goor dambe, Himilada rajo soo celinta Shacabka Somaaliyeed.
Xisbigu SSUP wuxuu ogyahay, in dhamman xubnaha Baarlamaanka ayan ahayn dambilayaal, oo ay ku jiraan xubno waddani ah oo nasiib darro waqtiga xaadirka ah caatifadda Qabiilku ka xoog badisay.
Marka aan intaasi cayimnay waxaa iyada muhiim ah in aan halkan ka caddeyno doorka Strateejiga ah ee Xisbiga SSUP kaga aadan marxalladan kal guurka ah:
1- Xisbiga SSUP in uu si toos ah talo u gudbiyo, Baarlamaanka iyo Dowladda Federaaliga ee KMG ee ku wajahan maslaxadda Guud ee Soomaaliyeed, kuwasoo waafaqsan Xeerka iyo Barnaamijka Xisbiga.
2- Xisbiga SSUP wuxuu qaadanayaa dowrka ilaalinta danaha Soomaaliyeed
sida waafaqsan Xeerkiisa iyo Barnaamijka,tasoo aan ku qotomin u xaglin Qabiil diyaarna u yahay in uu ka hor yimaado kuwa ku gabbada magaca Qabiilka si ay u fuliyaan danahooda gaar ah, kana weecda danaha Guud ee Soomaaliyeed.
3- Xisbiga SSUP in uu abaabulo, farsamayaqaanadda,waxgaradka iyo muwaadinka Somaaliyeed, iyo Ururadda Madaniga ah (Civil Society) oo la wadaago aragtida Siyaasadeed ee Xisbiga, tasoo ah dhismaha Bulsho Dimoqaraadi ah, ee ku qotonta :Sinnan Cadaalad iyo Midnimo.
4-Xisbiga SSUP wuxuu kaalin wax ku ool ah ka qaadan doonaa, maslaxad ka dhalinta iyo heshisiinta Ummada walaalaha ah ee Soomaaliyeed oo la kala dilay lana kala qeeybiyay.
5- Xisbiga SSUP wuxuu kaalin wax ku ool ah ka qaadan doona tallabo kasta ee suurta gelinaysa dib u soo celinta kalsoonida Shacabka Somaaliyeed.
6- Xisbigu SSUP wuxuu kaalin wax ku ool ka qaadanayaa u iftiiminta dhallinyarada iyo jiilka soo koraaya, kaalinta laga rabo in ay ka qataan dib u dhiska iyo ilaalinta danaha waddankooda, ha noqdeen kuwa jooga Dalka gudihiisa iyo kuwa ku nool caalamka intiisa kale.
7 – Xisbiga SSUP wuxuu u baaqayaa Dowladaha daneeya Soomaliya, Ururrada Caalamiga ah, Ururrada Heer Goboleedka ah in ay gacan ka geystan dib u dhiska Soomaaliya.
8- Xisbiga SSUP isagoo ogsoon baahida dib u dhiska Dalka, isagoo ka warqaba dabeecadda gaarka ah ee Dowladda Federalka Soomaaliya, wuxuu u baaqayaa Dowladaha Deeqda Bixiya, Ururrada Caalamiga ah in, marka hore shuruud adag ay ku xiraan qaabka maamulka deeqaha ay ku bixinayaan dib u dhiska dalka, lana xisaabtamaan Dowladda Fedeeralka ee Soomaaliya.